အီတလီ4ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု Cable Reel ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး အီတလီ4ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု Cable Reel - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Cable elsရာဝတီ > အီတလီ Cable elsရာဝတီ > အီတလီ4ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု Cable Reel
အီတလီ၏4ထုတ်ကုန်တိုးချဲ့ခြင်း Cable ကို Reel ၏ 1.Product နိဒါန်း
Cable reel သည်သေးငယ်သောတပ်ဆင်မှုနေရာ၊ အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်းတို့ကြောင့်မိုဘိုင်းဂီယာ (စွမ်းအင်၊ ဒေတာနှင့်မီဒီယာ) ၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
2. ထုတ်ကုန် Parameter (သတ်မှတ်ချက်) ၏အီတလီ4Outlet Extension Cable ကို Reel
အမျိုးအစား L ပလပ် AC
ပလပ် Insert Material
ပလပ်စတစ် film,Carton box
3.Product Feature နှင့် Italy တွင်အသုံးပြုနိုင်သော4Outlet Extension Cable Reel
၃။ အပူလွန်ကဲမှုရှိသောဤကေဘယ်ကြိုးသည်မိသားစု၊ စက်ရုံများ၊ ကျောင်းစသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၄။ Italy4Outlet Extension Cable Reel ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဤအမျိုးအစား Cable Reel သည် adapter cord reel တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ ခုတွင် surge protector၊ circuit breaker နှင့် RCD protection တို့ပါဝင်သည်။ 15M, 20M, 25M, 30M, 50M နှင့် Custom length မလိုအပ်သော plug တို့ဖြင့်အပူဖြတ်ထွက် switch သည်, 4-way socket-outlets, IP20 socket-outlet ။
အီတလီ၏4ထုတ်ကုန်တိုးချဲ့ခြင်း Cable ကို Reel ၏ 5.Product ကိုအရည်အချင်း
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: တစ်လလျှင် 1000 Piece / Pieces
6. အီတလီနိုင်ငံသို့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း4Outlet Extension Cable Reel
အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက်လုပ်ငန်းလုပ်ရက် ၂၀ မှ ၂၅ ရက်အတွင်း။
ငွေလွှဲခြင်း၊ Paypal ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 30% T / T ကိုကြိုတင်ငွေလက်ခံနိုင်သည်။
hot Tags:: အီတလီ4ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု Cable Reel, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း